Dawladda Minnesota oo qarka u saaran in la xiro
Iska jir Masawir qaadooyinka (Cameras) laga qotomiyey wadooyinka Minneapolis.
Khaaridada Gobolak Minnesota oo la qafiley |
Isha Sawirka: KSTP TV
Maanta oo ah bisha June 30 keeda aqalka baarlamaanka Minnesota waxaa ka socda xusul duub iyo heshiisyo hoose si loo badbaadiyo xiritaanka dawladda Minnesota qayb ka mid ah. Haddii caawa habeen kala bar lagu guulaysan waayo waxaa ay reer Minnesota birimo luulyo ku ciidi doonaan dawlad qayna shaqaynayso qaybna xiran tahay. Dagaalkan waxaa uu ku qotomaa khilaaf xagga sharci dejinta oo la xiriira miisaaniyadda gobolka iyo siyaasadaha iska soo horjeedoa
Gudoomiye maxkameed oo maanta qoraal soo saaray ayaa ku baaqay in hadii wax kasta la xiro aan la taaban adeegga dhinaca caafimaadka.
Meelaha uu saamayn ku yeelan doono waxaa ka mid ah:
Meelaha laga goosto shatiga baabuur wadida
Adeegga wadooyinka iyo meelaha musaafuriinta ku nastaan ee wadada dhexdeeda
Waxaa aad looga shaqaynayaa in xiritaanka dawladda gobolka aanay saamayn ku yeelanin gaadiidka dadweynaha, nabadgelyada, iyo dhamaan adeega muhiimka ah.
Baarlamaanka maraykanka gaar ahaan Minnesota ayaa iscanaadkiisa uu la mid yahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya weliba uga sii dheereeya kala qaybsanaanta iyo xarig jiidka aan dhamaanayn iyo kala qaybsanaanta. Gobolada maraykanka kii ugu danbeeyey oo dawladdiisa la xiro waxaa uu ahaa gobolka Tennessee 2001.
Bisha June 7 deeda ayaa si rasmi ah looga qotomiyey qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Minneapolis camerooyin loogu talo galay inay sawiraan ama qabtaan dadka aan raacin calaamadaha nalalka gaadiidka kala haga waa samaafrayaasha eh. Sharcigan oo dhaqan geli doona Bisha July 7deeda 2005 waxaan dadweynaha Soomaaliyeed uga digaynaa inaany ku sirmin. Sharcigii iyo nidaamkii wadooyinka ee magaalada oo dhan is isbedelay. Ganaaxa halkii mar oo uu qof qalad galo waa $130.
Habka ay u shaqeeyaan waa:
Markii uu qofka soo galo wadada oo uu nalka gaduudan daaran yahay ayey sawir ka qaadaysaa taargada baabuurka ama astaanta baabuurka (Plate number) ka dib qofka ganaaxa waxaa loogu soo dirayaa boostada gurigiisa.
Marlabaad dadweynaha Soomaaliyeed waxaa laga codsnayaa inay ka foojignaadaan warkanna isgaarsiiyaan waayo waxaa dhici karta in dadka qaar aanay ogayn ilaa dhowr ganaax ay helaan. Camerooyinka laga qotomiyo wadooyinka magaalooyin badan ayaa dunida ka jira laakiin Minneapolis waa ku cusub tahay.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan camerooyinka waxaad ka heli kartaa websute ka ah www.ci.minneapolis.mn.us/stoponred.
Goobaha lagu rakibay Camerooyinka Minneapolis waa kuwan:
35th Street East & 1st Avenue South
35th Street East & 2nd Avenue South
36th Street East & 1st Avenue South
East Hennepin Avenue & 10th Ave SE/Johnson Street NE
2nd Avenue North & 3rd Street North
Park Avenue & 28th Street East
Park Avenue & 9th Street South
8th Street S & 5th Avenue S
11th Street & Hennepin Avenue
West Broadway Avenue & Lyndale Avenue North
West Broadway Avenue & Washington Avenue North
Franklin Avenue West & Nicollet Avenue
Faafin: SomaliTalk.com | Jun 30, 32005